कोभिड-१९ संक्रमण भन्दा कोभिड फोबिया धेरै - Lekhapadhi लेखापढी विशेष : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २६ बैशाख २०७८, आईतवार १३:४९ मा प्रकाशित
सन् २०२० को सुरुवातसँगै संसारमा अपरिचित रोग कोभिड-१९ विश्वभर सनसनी फैलियो, नेपाल पनि अछुत रहेन । औषोधोउपचारमा पुरै अन्यौल बनेको स्वास्थ्य क्षेत्र, ब्याक्ति तथा विज्ञहरुकै सल्लाह-सुझाव अनुरुप यसको नियन्त्रणका लागि (लकडाउन) अर्थात सबै घर भित्र बस्नुको विकल्प रहेन र सोहीअनुरुप लामो समय लकडाउन भयो ।
माजिक सञ्जालमा कति सत्य त कति भ्रमपूर्ण भाईरल बनेका कोरोना सम्बन्धीका सामाग्रीहरुले आम मानिसलाई कोरोना लाग्नु भन्दा कोरोना फोबिया बनाईरहेको छ ।
२०२० को मध्य हुँदै उत्तरार्द्धमा विस्तारै सामान्य बन्दै गएको जनजीवन पुन: कोरोनाको नयाँ भेरियन्टकाे दाेश्राे लहरले त्रासदी छाएको अवस्था छ । आम सर्वसाधारणमा त्रासदीपूर्ण वातावरण बनाउनुमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूकाे निकै ठुलो भुमिका खेलेको मेरो अनुमान रहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा कति सत्य त कति भ्रमपूर्ण भाईरल बनेका कोरोना सम्बन्धीका सामाग्रीहरुले आम मानिसलाई कोरोना लाग्नु भन्दा कोरोना फोबिया बनाईरहेको छ । यसमा मिडियाहरुले पनि थोरै केही नकरात्मक भुमिका खेलिरहेका छन्, साथै राज्य संयन्त्रले पनि दैनिक यति जनाको मृत्यु, यतिजना कोरोना संक्रमित भनि डाटा पेश गरिरहनुले सर्वसाधारण आत्तिरहेका छन् ।
सत्य-तथ्य डाटा तयार गरिनु राम्रो कुरा हो, तर कतिपय अवस्थामा त्यसले समाजमा पार्ने नकरात्मक असरका बारेमा अध्ययन गरि लुकाउने छुपाउने कार्य पनि गरिनु पर्दछ । अहिलेको स्थितिमा आम मानिसहरु र समुदायमा बढी भन्दा बढी सचेतना फैलाउने हो । यसको मतलब कोरोना यस्तो-उस्तो, यति मरे, उति मरे भनेर बढाई चढाई गरेर समाचार प्रकाशित र प्रशारण गर्ने बेला होईन । भ्रम फैलाउने र स्थितिलाई भयावह अवस्था बनाउने र आम मानिसहरुलाई मानसिक रुपमा कमजाेर बनाउने काम कोही ब्यक्ति वा संस्था र सरकारी संयन्त्रले पनि गरिनु त्यति वान्छनीय देखिदैन ।
हाम्रो देशमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरुको ठुलो संख्या छ। उनिहरुमा लकडाउन भयो भने के खाने कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले छाएको छ । राज्यले उनिहरुका लागि के योजना ल्याएको छ? सरकार यसतर्फ खोई जिम्मेवार बनेको ?
मानिसहरु कोरोना लाग्नु भन्दा पहिले नै हस्पिटलमा बेड र भेन्टिलेटर छ/छैन सोध्न थालेका छन्। सचेतना फैलाउने नाममा भारत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोरोनाले मृत्यु भएका सयौं लाशहरु संयुक्त सत-गद गरेका तस्विर बारम्बार पोष्ट गरेर मानिसहरुलाई मानसिक रुपमा आतंकित बनाउनु एक प्रकारको अपराध हो। सम्बन्धित निकायको यस तर्फ छिट्टै ध्यान जाओस् ।
सचेतना फैलाउ यसका विभिन्न तरिका छन्, सचेतनाको नाममा डर र त्रास फैलाउने होईन, यसले गर्दा मानिसहरुमा कोभिड-१९ संक्रमण नहुँदै मानसिक रुपमा संक्रमित बनिरहेका छन् । हाम्रो देशमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरुको ठुलो संख्या छ। उनिहरुमा लकडाउन भयो भने के खाने कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले छाएको छ । राज्यले उनिहरुका लागि के योजना ल्याएको छ? सरकार यसतर्फ खोई जिम्मेवार बनेको ?
राज्य र सम्वन्धित निकायले यस तर्फ समयमै सोचोस् अन्यथा कोरोना संक्रमित भन्दा मानसिक रोगिहरुको संख्या बढ्दै जाने छ ।
बिस्तारै काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा निशेधाज्ञा जारि गरिरहेको छ । विस्तारै सामान्यतर्फ डोरिदै गरेको मानिसहरुको जनजीवन पुन: अस्तव्यस्त तिर ढल्किदै छ । राज्य र सम्वन्धित निकायले यस तर्फ समयमै सोचोस् अन्यथा कोरोना संक्रमित भन्दा मानसिक रोगिहरुको संख्या बढ्दै जाने छ । त्यो भन्दा ठुलो भयावह अवस्था अरु के हुन सक्ला ?
बिबेक चन्द ठकुरि
(ठकुरी, समसामयिक राजनैतिक, सामाजिक, रास्ट्रिय एबं प्रत्यक्ष जनसरोकारका बिषयबस्तुहरुमा शसक्त रुपमा स्वतन्त्र कमल चलाउदै आउनुभएको छ । )